Mudane Dirir ?rajo ayaan ka qabnaa in beesha caalamku maanta keento diyaarado gurmadka bixiya? – Radio Daljir
Nofeembar 12, 2013 4:28 b 0
Garoowe, November 12, 2013 – Guud ahaan deeganada Puntland waxaa ka socda gurmadyo kala duwan oo loo fidinayo dadka wax ku noqday roobabkii dabaylaha iyo qabowga watay ee ka da?ay xeebaha gobollada Nugaal iyo Guardafu, guddi ay dowladu u xil-saartay ayaa sheegay in howluhu meel wacan u marayaan.
?Gaadiid kala duwan oo gurmadyo u sida deeganada duufaanta iyo roobabku ka dheceen ayaa qaybtood gaaray dhulkii loogu talo-galay, baaritaano ayaa weli socda sidoo kale.? Ayuu yiri wasiirka qorshaynta ee Puntland Maxamuud Caydiid dirir oo ah gudoomiyaha guddiga.
Madaxweynaha Puntland ayaa shalay gelinkii dambe ku dhawaaqay guddi ka kooban qaybaha kala duwan ee xukuumada, kuwaas oo abbaabulaya gurmadyada loo fidinayo dadka wax ku noqday roobabkii dabaylaha iyo qabowga watay ee ka da?ay xeebaha Puntland.
?Tirada dadka dhimanaya waa sii kordhayaan, wadooyinku waa go?doon, taas waxay dhimaysaa rajada ah in gargaar lala gaaro dadka masiibadu haleeshay.? Ayuu yiri Maxamuud Caydii Dirir
Wasiirka qorshaynta ee Puntland waxaa uu rajo wanaagsan ka muujjiyey codsi maamulku shalay u gudbiyey beesha caalamka, kaas oo dhigayey in la helo diyaarado gurmad ah si gargaar deg deg ah loola gaaro dadka dhibaataysan ee ku jira dhulka aan gaadiidku geli karin.